China Cchọ mma ọkwa GSH l-Glutathione / lglutathione ntụ ntụ Mbelata ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Guanlang
Ngosiputa mma GSH l-Glutathione / lglutathione ntụ ntụ Mbelata maka akpụkpọ na-acha ọcha ntụ ntụ
Aha ngwaahịa: L-glutathione Belata
CAS Nke: 70-18-8
Aha ndị ọzọ: l-glutathione
EINECS Nke: 2,000 -725-4
Ọcha: 99% min
Glutathione (GSH) ka akpọrọ Reduced glutathionema ọ bụ L-GlutathioneReduedu, ihe dị mkpa antioxidant na osisi, anụmanụ, fungi, na ụfọdụ nje bacteria na archaea, a na-acha ọcha ntụ ntụ. Ọ bụ atripeptide na gamma peptide linkage n'etiti carboxyl otu nke glutamate n'akụkụ yinye na amine otu nke cysteine, na carboxyl otu nke cysteine ​​na-ejikọta ya na njikọ peptide nkịtị na glycine.Thiol iche iche na-ebelata ndị ọrụ, dị na ịta ahụhụ gburugburu 5 mM na mkpụrụ ndụ anụmanụ. Glutathione na-ebelata njikọ disulfide e guzobere n'ime cytoplasmicproteins na cysteines site na ije ozi dị ka onye inyeaka elektrọn. Na usoro,glutathione gbanwere ya n'ụdị oxidized, glutathione disulfide (GSSG), a na-akpọkwa ya L-glutathione.
Amonia Ugboro abụọ
Chloride Ugboro abụọ
Sọlide ≤ 300pm
Arọ ọla ≤10ppm
Loss na ihicha (3h na 105 ℃) 0.5%
L-glutathione oxidized 1.5%
Total adịghị 2.0%
Assay (akọrọ ndabere) 98.0% ka 101.0%
1. Chebe umeji ma gwọọ ọrịa ndị metụtara imeju.
2.Treat tumors ma belata mmetụta nke chemotherapy na radiotherapy.
3.Glutathione dị ka ọgwụ mgbochi, nwere ike ijikọta na ogige ndị na-egbu egbu, ion ion dị arọ ma ọ bụ ihe carcinogenic iji kwalite nsị ha. Enwere ike iji ya maka ọgwụgwọ detoxification nke acrylonitrile, fluoride, carbon monoxide, ọla dị arọ na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ.
4.Gwọọ ọrịa anya, karịsịa cataracts.
5.Glutathione nwere ike idozi ahaghị nhata nke acetylcholine na cholinesterase. Ọ na-arụ ọrụ mgbochi nfụkasị.
Ihe omumu ohuru egosiputara na otutu ihe nwere ike inwe mmetuta nke igbochi oria mmikpo.
Nri na ngwa:
1.Glutathione nhata na vitamin C, enwere ike ịgbakwunye yogọt na nri ụmụaka ma rụọ ọrụ na-eme ka ahụ sie ike;
2.Since glutathione nwere ike igbochi pigmentation, enwere ike itinye ya na mkpụrụ osisi mkpọ iji gbochie Browning;
3.N'ihi reducibility nke Glutathione, enwere ike itinye ya na ngwaahịa ntụ ọka iji rụọ ọrụ mbelata ma wusi amino acid ike;
Agbakwunye Glutathione na achịcha nwere ike belata oge agwakọta na usoro nrụpụta
5.Glutathione nwere ekpomeekpo anụ siri ike mgbe agwakọtara ya na L-glutamate, ihe ndị na-eme ka acid dị ụtọ ma ọ bụ ngwakọta ha.
Glutathione nwere ike igbochi nucleic acid ma welie ekpomeekpo na achicha azu.
6.Glutathione nwere ike ime ka ekpomeekpo sie ike n’ime anụ, cheese na ngwaahịa nri ndị ọzọ.
7.Ddị nri dị iche iche na-arụ ọrụ na nri ahụike na-akwado ya na glutathione dị ka ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ngosiputa Ngwa na ngwa:
1.Glutathione nwere ike ime ka ihe dị na cytotoxic dị ọcha. Ojiji nke nlekọta anụ ahụ nwere ike ịgwọ ma belata oke ọla dị arọ dị na akpụkpọ ahụ na toxins na ájá.
2.Glutathione bụ mgbochi antioxidant na-egbochi ịka nká. Ọ nwere ike wepu ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla na ahụ ma jigide ọrụ sitere na protein na enzymes. Ọ bụ isi free radical scavenger ke idem, nke mere na free radikal scavenging mmeghachi omume nwere ike ịga n'ihu.
3.Glutathione nwere mmetụta dị mma na-acha ọcha site na transdermal absorption. Ọ na-egbochi mmepụta nke ihe efu efu na
peroxides si melanin iji belata ihe ndị dị n'ime mmiri nke melanocytes ma mee ka ihe ndị na-egbu egbu si na cell pigmenti kwụsị.
O mechara chebe mkpụrụ ndụ ndị na-acha uhie uhie site na necrosis na metamorphism.
Nke gara aga: Ngwaahịa na-ere ahịa China Ogologo Ogologo Mpepu ntụ ntụ 99% Orlistat CAS 96829-58-2
GSH ntụ ntụ
lglutathione ntụ ntụ
Trending Products China High Quality arọ Los ...